အိမ်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ဖန်တီးနည်း | Bezzia
တောရက်စ် | | နေအိမ်
အိမ်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဥ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် တစ်ကြိမ်တွင် နာရီများစွာမဖြုန်းဘဲ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေစေရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးတွေ မစုမိအောင် နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မဟုတ် ဖရိုဖရဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်နေကုန် သန့်ရှင်းရေးကို လက်တွေ့ကျကျ မြှုပ်နှံထားရတဲ့အပြင် အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ သာယာမှုကိုလည်း ခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်မှာနေရင်း စည်းစနစ်ကျတာက စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ အတူတူပါပဲ။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အနံ့အသက်ကောင်းမွန်သော အရာအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည်။ ၎င်းသည် သင့်အိမ်သည် သင့်ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်း ခံစားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး။ သို့သော် အချိန်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် စည်းလုံးမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို လိုက်နာရန် မလွယ်ပါ။ ပြုပြင်ရန်၊ အိမ်အတွက် သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် မတူပါ။
1 အိမ်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်မှာ ဘာတွေပါဝင်လဲ။
အိမ်ရှိ အခန်းအားလုံးသည် တူညီသော အပ်နှံရန် မလိုအပ်ဘဲ ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုရန်အတွက် ချန်ထားရမည့် အခန်းများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ လိုအပ်သည်။ သန့်ရှင်းနေဖို့ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ပိုးသတ်ပြီး အခြေအနေကောင်းတယ်။ အစီအစဥ်တစ်ခုဖန်တီးရာတွင် ဤအရာသည် ပထမဆုံးစီစဉ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ အိမ်သန့်ရှင်းရေး.
အိမ်တွင်းရှိ အခန်းများနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတင်းကောင်းကတော့ မင်းရဲ့ သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ကို လိုက်နာရင် ၊ တစ်နေ့ကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက်က အရာအားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။. ဤအရာများသည် သင့်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းသင့်သောအရာများဖြစ်သည်။
အိပ်ခန်းများ: ညဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အနံ့ဆိုးများနှင့် စိုထိုင်းဆများကို ဖယ်ရှားရန် နေ့တိုင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းရမည်။ အိပ်ယာခင်းများကို ကောင်းစွာဆန့်ထုတ်ပြီး အဝတ်နှင့် ဖိနပ်များကို စုဆောင်းထားခဲ့ပါ။ မြင်နေရသည့် စင်များ သို့မဟုတ် လက်တင်ကုလားထိုင်များတွင် အဝတ်များ စုဆောင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ရေချိုးခန်း: ရေချိုးကန်နှင့် အိမ်သာအပေါ်မှ အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပါ။ မှန်ကိုလည်း နေ့စဉ် သန့်စင်ပေးသင့်သောကြောင့် သင့်ရေချိုးခန်းသည် နေ့စဉ် သန့်ရှင်းနေမည်ဖြစ်သည်။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ: ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ စုပုံနေခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် နေ့ဘက်တွင် ပန်းကန်ဆေးစက်ကို တင်ပါ၊ သင့်တွင် မပါရှိပါက မီးဖိုချောင်ကို ရှုပ်ပွမနေစေရန် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ အစာအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန် ကြမ်းပြင်ကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။
ဧည့်ခန်းညဘက်ဖတ်ပြီးရင် ဆိုဖာနဲ့ ကူရှင်တွေ ထား၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ စာအုပ်တွေ ထားပေးပါ။ အရာအားလုံးကို သူ့နေရာမှာထားပြီး ကော်ဇောကို ဖုန်စုပ်လိုက်ပါ။
တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက် အချိန်အနည်းငယ်ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ညစ်ပတ်သော အရာများကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်အိမ်လုံးကို ဖုန်စုပ်၊ ကြမ်းပြင်ကို သုတ်ပါ၊ ဖုန်မှုန့်များကို သန့်စင်ပါ။ ပရိဘောဂတွေအားလုံးကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အိပ်ယာခင်းများပြောင်းပြီး အိမ်သုံးပိတ်အ၀တ်လျှော်ရန် အခွင့်အရေးယူပါ။
အိမ်၏အရေးကြီးသောနေရာများနှင့် အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် တစ်လလျှင် တစ်ရက်အပ်နှံပါ။ သင့်တွင် ဥယျာဉ် သို့မဟုတ် ကားဂိုဒေါင်ရှိလျှင် ဤသည်မှာ ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် မှန်ကန်သောနေ့ဖြစ်သည်။ အစွန်းအထင်းများနှင့် ဖုန်မှုန့်များ စုပုံခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ပြတင်းပေါက်များကို သန့်ရှင်းစေပြီး ကုလားကာများကို ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးယူပါ။ မီးဖိုချောင်တွင် အနည်းငယ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ ကြွေပြားများ၊ ပရိဘောဂ၏အတွင်းပိုင်းကို ကျော်သွားပါ။ အလုပ်မလုပ်သော အရာအားလုံးကို စွန့်ပစ်ပါ။
ဤကဲ့သို့သော သန့်ရှင်းရေးတာဝန်များကို စီစဉ်ပေးခြင်းသည် သင့်အိမ်ကို ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိသောနည်းလမ်းဖြင့် သန့်ရှင်းနေစေမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင် အညစ်အကြေးတွေ စုပုံလာပြီး သန့်ရှင်းရေးစလုပ်ရမယ့်နေ့ ရောက်လာတဲ့အခါ နာရီတွေ ကုန်ဆုံးသွားပြီး အလုပ်က ပျံ့နှံ့သွားပါပြီ။ အကယ်၍ သင်သည် အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် သန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ကို လိုက်နာပါက နေ့စဉ် မိနစ်အနည်းငယ်ဖြင့် သင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်တီးပါ။ သင့်အိမ်သည် လှပပြီး သပ်ရပ်လှပနေမည်ဖြစ်သည်။.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဘုရားကျောင်းထဲရောက်နေသလိုမျိုး ခံစားရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ မင်းရဲ့အိမ်ဟာ မင်းရဲ့ခိုလှုံရာဖြစ်ပြီး မင်းရဲ့အရသာအတိုင်း သန့်စင်အောင်၊ ပိုးသတ်ပြီးပြီ၊ အပြည့်အဝခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » အိမ်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
ဆောင်းရာသီမှာ ပြေးဖို့ အကြံပြုချက် ၅ ခု
Torticollis ကို သက်သာစေရန် အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံးများ